Talooyin ku aaddan ka -badbaadidda telecommuting | Bezzia
Maria vazquez | 15/09/2021 10:00 | Haweeney fulin ah
Faafida ayaa badashay caadooyinkeenii badnaa. Intii lagu jiray xidhitaanka qaar badan oo idinka mid ah waxay ahayd inaad ka shaqaysaan guriga waxaanan hubaa inaadan kulligiin yeelan doonin xafiiskaaga marka tan la dhammeeyo. Taasi waa sababta aan ugu fikirnay in qaar ka mid ah talooyin si aad uga badbaado isgaarsiinta way ku anfici karaan.
Shaqada telefoonku waxay leedahay faa'iidooyin aan dhammaanteen awood u leenahay inaan aragno: waxaan kaydinnaa safarada waxaanan ku raaxeysanaa dabacsanaanta waqtiga badan. Si kastaba ha ahaatee, oo kaliya kuwa naga mid ah oo telecommuting sanado waxaan kaloo ognahay dhibkooda. Waan soo aragnay oo waxaan helnay qalab aad waxtar u leh si aan uga gudubno.
1 U samee xadka maalinta shaqada
2 Samee "hab" shaqeynaya
3 Waxbar qoyska
4 Abaabul jadwalkaaga
5 Ka bax guriga
U samee xadka maalinta shaqada
Baro sida loo maareeyo waqtiga waa furaha marka telecommuting. Xaqiiqda ah in la helo dabacsanaan waqti badan ah iyo xafiiska gurigu wuxuu nagu dhiirri -gelin karaa inaan kordhinno saacadaha shaqada, sababtuna waa inaan dib u dhigno, ama sababta oo ah marka shaqada la dhammeeyo waxaan jirrabinnaa inaan sii wadno ka jawaabista emaylka.
Xaddid saacadaha shaqadayada marka guriga la joogo waa muhiim si maalintayadu aysan u helin 24 saacadood. Haddii aysan jadwal kuu dejin shaqadaada laakiin u dejiyaan yoolal, xaddid saacadahaaga. Go'aanso laga bilaabo waqtiga ilaa waqtiga aad aadayso shaqada iyo marka aad aaddo nasashada. Haddii aad rabto inaad noqoto mid wax soo saar leh oo ilaaliya dheelitirka u dhexeeya shaqadaada iyo nolosha qoyskaaga, waa inaad barataa inaad ka go'do shaqada oo aad ixtiraamto saacadahaaga nasashada.
Samee "hab" shaqeynaya
Markuu qofku bilaabo telecommute, jirrabaadda ayaa keenta inuu lumiyo baahidaas ahayd inuu labbisto si uu shaqada u aado. Caadi ahaan waa khaladka koowaad ee isku xira kuwa kale oo badan. Waana in si looga badbaado isgaarsiinta ay fure u tahay in lagu daro caadooyinka na sameeya geli hab shaqo.
Kala saar qaabka shaqada iyo qaabka qoyska waxay fure u tahay in madaxeennu si habboon u shaqeeyo. Sidoo kale in aan waxbarno qoyskeena, haddii aan mid leenahay, goorta ay tahay in ay naga dhex -galaan. Dooro meel aad ka shaqayso Inaad isticmaasho oo keliya markaad shaqayso oo aad u labbisto sidii qof guriga ka soo muuqan kara wakhti kasta. Xoogga saar shaqadaada ilaa inta loo baahdo ka dibna iska ilow meeshaas ama sahaydaada shaqo ku ururso armaajo oo naftaada ku raaxee.
Marka qof guriga jooga uusan weligiis teleefan horey u soo marin, qoyska oo dhan waxaa lagu qasbayaa inay qaataan jadwal cusub. Iyo dhammaan isbeddelada caadooyinka iyo caadooyinka u baahan tahay wakhti la qabsasho. La hadalka qoyskayaga, sharraxidda jadwalkayaga iyo in xitaa haddii aad guriga joogto si buuxda uma heli doontid ilaa dhammaadka maalintaadu ay fure u tahay bilow kasta oo wanaagsan.
Jidhka Waxay ku casuumi doontaa qoyskaaga inay ku dhexgalaan maalmaha ugu horreeya intaad shaqeyneyso adigana aad ka qaybgasho shaqooyinka guriga ee sugi kara ama ku raaxaysan kara waxyaabo raaxo leh oo aadan ka heli karin xafiis. Waa wax caqli gal ah in lagu mashquulo inta lagu jiro usbuucyada ugu horreeya, sidaa darteed muddadaas waxaa xitaa ka sii muhiimsan inaad adkayso oo haddii aad qof ku haysato guriga intaad shaqeyneyso inay kuu digi karaan markaad ku mashquusho, wada -shaqaynta! Markaad dhammaantiin la qabsataan oo hab -raaca cusubi noqdo mid gudaha ah, wax walba way sahlanaan doonaan oo waxaad noqon kartaan kuwo dabacsan.
Haddii aad wadatay ajande markaad tagtay xafiiska, maxaad hadda u joojinaysaa? Abaabul jadwalkaaga sidii aad hore u samaysay oo subax walba dib u eeg hawlaha, mudnaanta siiya kuwa ugu muhiimsan. Qor waqtiga ilaa waqtiga aad shaqayn doonto, waqtiga aad u hibeyn doonto duhurkii si aad wax u cunto oo u nasato ... Waxaad ku samayn kartaa adiga oo adeegsanaya ajenda warqad, kalandarka Google ama codsiyo fudud oo dareen leh sida Todoist.
Ka bax guriga
Markaan taleefan wada hadalno, waxaan lumineynaa dhinaca bulshada ee aan aadno xafiis, la sheekeysanno asxaabtayada ama aan kula qaxweyno waddada laga baxo. Inertia, sidoo kale, waxay nagu riixi kartaa inaan guriga joogno shaqada ka dib oo iska caabintu waxay lama huraan u tahay inay ka badbaado isgaarsiinta. Markaad teleefonka shaqayso waa ka sii muhiimsan tahay haddii ay suurtogal tahay la kulan asxaabta, ka qaybgal isboorti kooxeed, u bax si aad wax u cunto ama u aado dalxiis dhammaadka wiigga ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Haweeney fulin ah » Talooyin ku saabsan ka -badbaada isgaarsiinta